IFTIINKACUSUB.COM: Tix gabay ah :Wiil miskaha leexleexinaya oo cawradiisii muuqato.W/Tiriyay abwaan Maxamed Shukri Jamac.
Tix gabay ah :Wiil miskaha leexleexinaya oo cawradiisii muuqato.W/Tiriyay abwaan Maxamed Shukri Jamac.
Xumaantu waxa ay ahayd mid lala dhuunto oo la qarsado, balse hada xaalku maaha sidii aad ku ogayad ; waxkastaa waa ay isbadaleen, waana mida keentay in lagu faano fagaarahana lala-yimaado xumaantii oo heeryadeeda wadata.
Markii uu ka yaabay xaalku halka uu maraayo iyo inta uu ka gaysan karo wax ka sheega Xumaantaasi,ayaa waxaa Tixgaaban ka tiriyay Aqoon-yahan ,Abwaan ahna Gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland ,Maxamed Shugri Jamac oo aad in badan uga barateen in uu dad yawga Somaliyeed usoo gudbiyo Tixi iyo maansooyin wax ku-ool ah .
Waxa aad ii damqay dhaqan xumadii Yurub taaley oo la keenay dalkeenii .
Wiil xumaada iyo gabadh xumaataba waa la maqli jirey,
Laakiin inta loo goleeyo oo warbaahinta lagu cashariyo
Wiil miskaha leexleexinaya oo cawradiisii muuqato, waa arin ugub ah ; waxaana ka dhalatay oo aan ka tiriyay Tixdan:-
Akhlaaq xumada soo daahirtee
Iyo edeb darrada suuqa timi
Waa inkaar culuse
Ubadkaa dayacan ee ka baxay
Ee sida ugayb soo dhergey
I arkaay, maqlaay ceebahaas
Ooda laga qaaday
Ugaaskii lahaa baylahdaas
Aahe dhibi weydey
Aqoonyahanki doorsoonkan uu
Kuba ajoon waayey
Ifafaale weeyaan madaw
Illaahbaan ku dhaartee hadaan
Olole loo feydan
Adinkiyo hadaan laysku darin
Uurkoo laga diido
Albaabkaas hadii aan la xidhin
Oon ooda lagu giijin
Uumi iyo hadii boodh la qabey
Arladoo la gooyaan ka baqan
Aabudh iyo Hoose
Illaahay adoomaha kibra
Iyagoon ogeynbuu marqudha
Aargoosigiisuna ka kulul
Awoodiisa lama koobi karo
Erey laguma qeexiyo tilmaan
Oday ka sheekeeye
Irko noqosho iyo laabasho
Eebe lagu tuugo
Astaqfurula uunbaa ka furan
Eebe naga dhaaf.
Ka helTus Jawaabo dheeri ah
Waxaa tiriyay Abwaan Maxamed Shukri Jamac.